राजालाई रुपान्तरण गर्न सकिएन - समसामयिक - नेपाल
राजालाई रुपान्तरण गर्न सकिएन
- माधव नेपाल
पछिल्लो पटक राजा ज्ञानेन्द्रले तानाशाही व्यवस्था लादेपछि मलाई के लाग्यो भने, अब राजतन्त्रको औचित्य छैन । राजा स्वयं राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि यस्तो लाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन । राजा सक्रिय भएर पखेटा फिजाउन थालेपछि प्रजातन्त्र जहिले पनि अधूरो भयो । राजतन्त्र रहुन्जेल प्रजातन्त्र अधूरो हुने र जनताको अधिकार जुनसुकै बेला खोसिन सक्ने यथार्थबोध भएपछि नै गणतन्त्र स्थापना गरिछाड्ने निष्कर्षमा पुगिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसलगायत मुलुकमा रहेका वैधानिक दलहरूले गणतन्त्रको ‘ग’ समेत उच्चारण गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला मेरो नेतृत्वको नेकपा एमालेले जोखिम मोलेर गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको थियो, साउन ०६२ मा ।
जतिबेला म गणतन्त्रका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने निष्कर्षमा पुगेको थिएँ, त्यसबेला पार्टीभित्रकै केही साथीहरू गणतन्त्रमा जान सकिएला ? यस्तो निर्णय अहिले नगरौँ भन्दै डराएका थिए । भिन्न मत विद्यमान थिए । गणतन्त्रमा जानुहुँदैन, जान सकिँदैन भन्ने जबर्जस्त मान्यता बोक्ने साथीहरू पनि थिए । तर, विशेषगरी तत्कालीन नेतृ साहना प्रधान, वामदेव गौतमले मलाई बलियो साथ दिए । त्यसैले पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्णय गर्न सहज भयो ।
आन्दोलन उचाइमा पुग्नुअघि पनि राजालाई दिन सकिने ठाउँ केही बाँकी छ कि ? जापान/नर्वेको जस्तो सम्मान दिएर राख्न सकिन्छ कि ? संघर्ष गरेर रुपान्तरण र सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचिएको थियो । त्यसैले गणतन्त्र स्थापना गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि लामो समय धैर्य राख्यौँ । तर, केही गरे पनि राजालाई रुपान्तरण गर्न सकिएन । त्यो नभएपछि सहकार्यको सम्भावना रहने कुरै भएन । यही सेरोफेरोमा म र पार्टीको केन्द्रीय कमिटी गणतन्त्र स्थापना गर्ने मान्यतामा पुगेका थियौँ ।
पार्टीभित्रै गणतन्त्रमा जान आत्मविश्वासको अभाव देखिएपछि लाग्न थाल्यो– गणतन्त्रको आन्दोलनमा काठमाडौँबाट दुई–चार सयको जुलुस/प्रदर्शन निकालेर सम्भव छैन, बाहिरबाट सुरु गर्नुपर्छ । त्यसका लागि देशभर जन प्रदर्शन र र्‍याली निकाल्न मैले नेपाली कांग्रेसलाई प्रस्ताव राखेँ ।
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो आँट गरेनन् । उनी तयारै भएनन् । कांग्रेस डराए पनि हामी आत्मविश्वासमा थियौँ । त्यसपछि एमाले एक्लैले देशका विभिन्न स्थानमा जुलुस, र्‍याली, जन प्रदर्शन गर्ने निर्णय गर्‍यो । मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सोधेँ, “जनपरिचालनका निम्ति ‘आइसबेक्र’ गर्ने एक न एक नेता चाहिन्छ । एक्लै जन प्रदर्शन गर्ने आँट कसले गर्नुहुन्छ ? जसले अरूलाई पनि बाटो देखाओस् ।”
त्यो अग्रपंक्तिमा उभिने आँट देखाए, केन्द्रीय सदस्य रामनाथ ढकालले । ढकालले बुटवलबाट सकिन्छ भने । (उनी केही वर्ष पहिले बिते । उनीप्रति मेरो गहिरो श्रद्धान्जली छ ।) असोज ०६२ मा बुटवलमा विशाल सभा राख्न मैले प्रेरित गरेँ । अन्तत: ३ मंसिरको विशाल सभामा ५० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी भए । त्यो सभालाई मैले र वामदेव गौतमले सम्बोधन गर्‍यौँ । बुटवलमा आमसभा हुनुअघि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी मलाई भेट्न आएका थिए । उनले भने, “नेपालका राजनीतिक दलहरूमा जनताको विश्वास, प्रतिष्ठा रहेन । अब आन्दोलन उठ्न सक्तैन । तपाईंहरूले पार लगाउन सक्नुहुन्न ।”
मैले त्यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएँ । र, भनेँ, “त्यसो भए तिमी जनता कसका पक्षमा छन् भन्ने भ्रममा रहेछौ । २ मंसिरमा बुटवल आऊ र त्यहाँको सबैभन्दा अग्लो घरको छतमा बसेर दूरबिनले हेर । ५० हजारभन्दा तल भएछ भने म राजनीति छाडिदिन्छु ।” मैले नेताहरूलाई ताकेता गरिरहेँ, जनतामा उत्साह कस्तो छ ? कति मानिस सहभागी होलान् भनेर । बुटवलको आभसभाले आन्दोलनका पक्षमा सुनामी सिर्जना गरिदियो । देशभर उत्साहको तरंग जागृत भयो । गणतन्त्रका लागि माहोल बन्यो ।
त्यही बेला जावलाखेलमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटन भएको थियो । त्यहाँ मैले कांग्रेसलाई गणतन्त्रका पक्षमा आउन आह्वान गरेँ । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला उठेर खण्डन गरे । जनकपुर पुगेर गणतन्त्रका पक्षमा उठ्न आग्रह गरेँ । सद्भावना पार्टीका तत्कालीन नेता हृदयेश त्रिपाठीले गणतन्त्रको भ्रममा नपर्नुस्, त्यो भ्रममा परे हामी सिद्धिन्छौँ भने । कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले गणतन्त्रमा जाने प्रस्ताव राख्दा झन् ठूलो आपत्ति जनाएका थिए । तर, मेरो र एमालेकै अगुवाइमा बिस्तारै गणतन्त्रको माहोल बन्दै गयो । परिस्थिति परिपक्व बन्यो । एमाले नभएको भए देशमा गणतन्त्र आउन समय लाग्थ्यो वा नआउन पनि सक्थ्यो ।
गणतन्त्रले अहिले हामीलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । तर, जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने सवालमा हामी अलि पछि परेका छौँ । अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा कर्तव्य पूरा गर्न धेरथोर चुकेका छौँ । जहाँ कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सुधार्दै अब समृद्धिको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । समृद्धिसँगै जनताले गणतन्त्र स्थापनाको सुखद अनुभूति गर्न पाउँछन् ।